Eo akaikin'ny reny izay mitarika ny zanany madinika
« Ny hahazahoako ity zazalahy ity no nivavahako ; dia nomen’i Jehovah ahy izay nangatahiko taminy. Koa atolotro ho an’i Jehovah kosa izy : eny, amin’ny andro rehetra hiainany dia voatolotra ho an’i Jehovah izy. Dia nivavaka tamin’i Jehovah izy. »1 Sam. 1:27,28
Tokony hahatsapa ny reny kristianina fa mpiara-miasa amin’Andriamanitra izy ireo rehefa manabe sy mitaiza ny zanany amin’ny fomba hahafahan’izy ireo mitaratra ny toetran’i Kristy. Hahazo ny fiaraha-miasan’ny anjelin’ny lanitra izy ireo amin’io asa io, kanefa indrisy fa asa atao an-tsirambina izany. Noho izany dia voaroba amin’ny lovany i Kristy – ireo mambra tanora ao amin’ny ankohonany. Kanefa amin’ny alalan’ny fanatrehan’ny Fanahy Masina, dia afaka ny ho mpiara-miasa amin’ny olombelona Andriamanitra.
Tokony hamela akony lalina ao an-tsaintsika ny lesona napetrak’i Kristy rehefa nitrotro zazakely Izy. Mampahery ny ray aman-dreny mba hitondra ny zanany ho eo amin’i Jesosy ny teniny. Mety hikomy sy hanana firehetam-po tahaka ny an’olombelona rehetra izy ireo, kanefa tsy tokony hanakana antsika tsy hitondra azy ho eo amin’i Kristy izany. Nitahy ny ankizy izay nanana firehetam-po tahaka ny azy ireo Izy.
Matetika isika no manao fahadisoana eo amin’ny fanabeazantsika ny zanatsika. Matetika ny ray aman-dreny no mampanaram-po ny zanany amin’ny zavatra feno fitiavan-tena sy manimba, ka raha tokony hiasa mafy ho an’ny fanahiny mba ho famonjena azy izy ireo, dia avelany ho amin’izay sitraky ny fony izy, ka mitombo ao anatin’ny fihetseham-po maloto sy toetra tsy maha-te ho tia izy ireo. Tsy eken’izy ireo ny andraikitra nomen’Andriamanitra azy mba hanabe sy hitaiza ny zanany ho voninahitr’Andriamanitra. Lasa tsy afa-po amin’ny fomban’ny zanany izy ireo, ka ho ketraketraka rehefa tsapany fa noho ny fanaovany an-tsirambina no mahatonga ny hadisoan’ireo zanany, ary dia lasa kivy izy ireo.
Kanefa raha toa ka tsapan’ny ray aman-dreny fa tsy ho afaka velively amin’ny andraikitra fitaizana sy fanabeazana ny zanany ho an’Andriamanitra izy ireo. Raha toa ka ataony amim-pinoana ny asany, ka miara-miasa amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka sy asa mafana izy ireo. Raha toa ka ataony amim-pinoana ny asany, ka miara-miasa amin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny vavaka sy asa mafana izy ireo, dia hahomby eo amin’ny fitondrany ny zanany ho eo amin’ny Mpamonjy. Aoka ny ray sy ny reny hanolo-tena tanteraka, hanolotra ny fanahiny, ny tenany ary ny fony ho an’Andriamanitra alohan’ny hahaterahan’ny zanany.